လိင်အလိုဆန္ဒ၊ စိတ်ဓာတ်၊ ချိတ်ဆက်မှုစတိုင်၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များ (၂၀၁၉၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
JMIR Ment ကနျြးမာရေး။ 2019 ဇန်နဝါရီ 21;6(1): e9978 ။ Doi: 10.2196 / mental.9978 ။
Varfi N ကို1, Rothen S က1, Jasiowka K သည်1, နူ T က1, Bianchi-Demicheli က F1, Khazaal Y ကို#1.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယင်းရလဒ်ကို variable ကိုဘာစွဲအကြားအလားအလာလင့်များအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) နဲ့အကဲဖြတ်ကျဘာအသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်ပြေအောင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ခံစားချက်, ပူးတွဲမှုစတိုင်, Impulse အပါအဝင်အများအပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် psychopathological အချက်များ, နှင့်အကောင့်ထဲသို့အသက်, လိင်, နှင့်ဘာအသုံးပြုသူလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ယူခြင်းအားဖြင့် Self-လေးစားမှု။
CIUS, ဘာအသုံးပြုရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory နှင့်က Short စီးပွားပျက်ကပ်-ပျော်ရွှင်မှုစကေးအဆင်ပြေအောင်: တစ်ဦးက Web-based စစ်တမ်းပါဝင်သူ sociodemographic variable တွေကိုအဘို့နှင့်အောက်ပါတူရိယာနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ရသောကောက်ယူခဲ့သည်။ ထို့အပွငျပူးတွဲမှုစတိုင်ကိုပိတ်ရန်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး-Revised မေးခွန်းလွှာ (ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှား subscales) အတွက်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Impulse Sensation, အပြုသဘောဆောင်သောအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့ Impulse အပြုအမူစကေးရှာ, ဇွဲရှိခြင်း (မရှိခြင်း), ပုခုံးတွ (မရှိခြင်း), အအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့ အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုဟာ 1-ကို item ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေးနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
145 ဘာသာရပ်များ၏နမူနာလေ့လာမှုပြီးစီး။ စွဲလမ်းစေကျဘာအသုံးပြုမှု Impulse နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များ, ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲမှုစတိုင်နှင့်အထီးကျားပေမယ့်မမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
စွဲလမ်းစေကျဘာအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များနှင့်ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲမှုတစ်ခု function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
KEYWORDS: စွဲလမ်းစေအပြုအမူ; Impulse; အင်တာနက်; လိင်
အင်တာနက်ကိုကျယ်ပြန့် [ကျန်းမာရေး-related မေးမြန်းချက်အဘို့အပါအဝင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌အသုံးပြုပါသည်1-4] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး-related ရည်ရွယ်ချက်များ  ။ ဘာ [ခေါ်ဆောင်သွားပွညျ့စုံသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ပေးရည်ရွယ်ထားကြောင်းလိင် oriented Web-based လှုပ်ရှားမှုများကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဘုံအပြုအမူဖြစ်ပါသည်6] ။ ဘာထိုကဲ့သို့သောအော့ဖ်လိုင်းရက်စွဲများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ-ကစား, webcam interaction က, virtual reality နှင့်ညစ်ညမ်းရှာဖွေနေ, ချိန်းတွေ့ chatting အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများတိုက်ပိတ်-arousal (ဆိုလိုသည်မှာ, porn ကိုကြည့်), ပူးပေါင်း-arousal (ဆိုလိုသည်မှာ chatting), နှင့် nonarousal လှုပ်ရှားမှုများ (ရှာကြံဆိုလိုသည်မှာလိင်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်) အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည် .
ဘာ၏အလယ်အလတ်အသုံးပြုမှုကို [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာများတိုးချဲ့ဖို့အတွက်အထောက်အကူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းရင်းနှီးသော interaction ကများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါ8] ။ ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းကဲ့သို့သောအခြား Internet-related အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသောသူတို့အဖို့အလားတူ [9-11] သို့သော်အချို့သောကျဘာအသုံးပြုသူများသည် [ဖြစ်နိုင်သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူအသုံးပြုမှုစွဲလမ်းပုံစံများဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ12,13] ။ ဤရွေ့ကားပုံစံများများသောအားဖြင့် [ဤကဲ့သို့သောအခက်အခဲများကြားမှပြဿနာများသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်ဆက်လက်ရှိကြောင်းအင်တာနက်-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအလွန်အကျွံနှင့်ညံ့ဖျင်းထိန်းချုပ်အသုံးပြုခြင်းကိုအဖြစ်ဖော်ပြနေကြပါတယ်14,15] ။ အဘယ်သူမျှမများသဘောတူညီမှု [ဤရောဂါ၏စိတ်ကူးနှင့် ပတ်သက်. အောင်မြင်ထားပြီး12,16] ကမကြာခဏကျဘာစွဲအဖြစ်ရည်ညွှန်းပေမယ့် [17-20] ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအခြား Internet-related ပြဿနာအပြုအမူတွေများအတွက်အစီရင်ခံအဖြစ်  ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းကျဘာလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့ထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် (တိုက်ပိတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, လိင် webcam, chat, etc) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော porn ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့ arousal အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများ (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောအားကောင်းရန်, ချက်တင်ကနေလူမှုရေးဆုလာဘ် , ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကနေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) [12,22,23].
အများအပြားကလေ့လာမှုများ [အလုပ်အမှုဆောင် prefrontal ထိန်းချုပ်လျှော့ချရေး (ပြည်တွင်းရေးပန်းတိုင်စပ်လျဉ်းလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အတှေးကို select လုပ်နိုင်စွမ်း) အပါအဝင်စွဲလမ်းကျဘာနှင့်အခြားစွဲလမ်းမမှန်အကြားတူညီအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ24] ပုဂ္ဂလဒိဋ္ညစ်ညမ်း cue-related arousal နှင့်အလွန်အကျွံကျဘာအကြားအသင်းအဖွဲ့ [25,26] striatal cue reactivity ကို (neuroimaging ကျဘာတွေကိုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း ventral striatum လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်း) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကြားအသင်းအဖွဲ့  နှင့်ကျဘာစွဲ (ကကို အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှု feeling) ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္လက္ခဏာတွေ  နဲ့ Web-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များ၏ပုံစံများ  ။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျအရေးပါမှု၏ဖြစ်ဟန်သော်လည်း, ဘာစွဲအပေါ်သုတေသနပြုနေဆဲ [ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်25] ။ အထူးသဖြင့်, စွဲလမ်းကျဘာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းရင်းများ [understudied ရှိနေဆဲ12] ။ ဤသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူစှဲအကြောင်းကိုသဘောတူညီမှုများမရှိခြင်းတို့ကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
စွဲလမ်းစေကျဘာ၏ဖြစ်နိုင်သောဆုံးအဖွတျမည်သို့ပင်ဆိုစေပဏာမအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ [ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆီသို့သို့မဟုတ်ကွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေဆွဲသောအင်အားကြီးထင်ဟပ်29] နှင့်အပြန်အလှန် sexually လူတွေကိုလှုံ့ဆော်။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်ပစ်မှတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အရေးပါမှုကိုရှိနေသော်လည်း [22,30], လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကျဘာအကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်လေ့လာမှုများနေဆဲချို့တဲ့နေကြသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ်ကအခြားအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူမာတိကာခုနှစ်တွင် [9,31] ဘာ၏စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ psychopathological ဆက်စပ်မှုအပေါ်အများအပြားလေ့လာမှုများမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါစိတ်ခံစားမှုအဖြစ်စိတ်ရောဂါမမှန်နဲ့အသင်းအဖွဲ့ဖော်ပြထား  ။ အနိမျ့ Self-လေးစားမှုလည်း [(လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများဝေမျှခြင်း) sexting နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်32] အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ  နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ  ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စွဲလမ်းအင်တာနက်ဂိမ်းကစားပေါ်ရှိအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာ  အချို့လေ့လာမှုများ [စွဲလမ်းကျဘာမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုအမူကြောင်းအကြံပြု20,36].
ပူးတွဲသီအိုရီ [၎င်းတို့၏ပူးတွဲမှုစတိုင်များသည်နှင့်အညီရငျးနှီး, မိဘများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူမိမိတို့၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ interaction က၏ရလဒ်အဖြစ်လူတွေကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံဖော်လာအခြားသူများအား၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်ချက်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းစောဒကတက်သည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်အပြုအမူ37] ။ အထူးသဖြင့်, သူတို့မလုံခြုံပူးတွဲမှုစတိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးကိုရှောင်ကြဉ်ပူးတွဲမှုစတိုင်အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကို, ကိုထိခိုက်ကတိကဝတ်များရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့ interaction ကအဘို့အရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှတိုးနှင့်အတူအီဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှုဖြစ်နိုင်သည်မိတ်ဖက်ရရှိနိုင်မှုနှင့် validation ကိုသေချာစေရန်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းအပြုအမူတွေအတွက် overengage လူတွေကိုဦးဆောင်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်စွန့်ခွာအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် .
ထိုသို့သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူကို attachment စတိုင်များ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဟန်39] ။ တစ်ဦးကအပြုသဘောဆက်စပ်မှုယခင်က [စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအကြားသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်40] ။ ထို့အပွငျက [ခဲ့သည်41] [ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်သို့မဟုတ်ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲမှုအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ခြီးမွှောကျကြောင်းပြသ42] နှင့်အတိတ်၏စိတ်ထိခိုက်အမှတ်တရပစ္စည်းများ .
ထိုမှတပါး, Impulse [သတိထားမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲအပြုအမူတွေ၏ပွညျ့စုံမှဦးဆောင်နေတဲ့မျက်နှာစာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neuropsychological ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်43] ။ Impulse [စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ transdiagnostic အချက်ဖြစ်ပါသည်44] ပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်းအပါအဝင်  နှင့်အင်တာနက်လောင်းကစား  ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ယနေ့အထိ, စွဲလမ်းကျဘာနဲ့ Impulse အကြားအသင်းအဖွဲ့နည်းနည်းအာရုံစိုက်မှုကိုလည်းရရှိထား , ဤအသင်းအဖွဲ့လေ့လာခဲ့ကြသောသူတို့လေ့လာမှုများအတွက်ရောထွေးသောရလဒ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အချို့လေ့လာမှုများ, အလုပ်အမှုဆောင် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း [အတွက်25,26] နှင့် Impulse ရှုထောငျ့စွဲလမ်းကျဘာနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည် [25,26] ။ ဆနျ့ကငျြ, Wetterneck et al  စွဲလမ်းနှင့် nonaddictive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြား Impulse အစီအမံများတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။
Impulse ၏မကြာသေးမီက Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာမြောက်မြားစွာဘာသာစကားများသို့တည်ငြိမ်အချက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူဘာသာပြန်ပြီးပါပြီသောအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့, ပုခုံးတွ (မရှိခြင်း), ဇွဲရှိခြင်း (မရှိခြင်း), Sensation ရှာ, အပြုသဘောဆောင်သောအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့ (UPPS-P) Impulse အပြုအမူစကေးဖြစ်ပါသည် [47-50] ။ အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီး (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကြုံနေရသည့်အခါ Impulse ပြုမူဖို့သဘောထားကို), ပုခုံးတွ (မရှိခြင်း), ဇွဲ (မရှိခြင်း), အာရုံခံစားမှုရှာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရေးတကြီးပါ (စိတ်သဘောထားမှ: အဆိုပါအတိုကောက်အတိုင်းအတာအားဖြင့်အကဲဖြတ်မတူညီသော Impulse ရှုထောငျ့မှ related ဖြစ်ပါတယ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကြုံနေရသည့်အခါ) Impulse ပြုမူ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု  အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကြုံနေရသည့်အခါမျှမကအခြားအသင်းအဖွဲ့များထိုကဲ့သို့သောပုခုံးတွမရှိခြင်း, ဇွဲမရှိခြင်း, သို့မဟုတ်အပြုသဘောအရေးတကြီး (Impulse ပြုမူဖို့စိတ်သဘောထားအဖြစ်အကဲဖြတ်အခြား Impulse အတိုင်းအတာနှင့်အတူတွေ့ရှိခဲ့သည်သော်လည်း, အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီးနှင့်အပျက်သဘောစွဲလမ်းကျဘာခန့်မှန်းအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေကွောငျးဖျောပွခဲ့ ) ။
တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှကျယ်ပြန့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနေသော်လည်း, လိင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း, ရိုးရိုး, ဒါမှမဟုတ်လိင်ကွဲအဖွစျဖျောပွနိုငျ  ။ ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်တစ်ဦးလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်ရိုးရိုးတိမ်းညွတ်နှင့်အတူယောက်ျားကျဘာများအသုံးပြုမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (လိင်ကွဲအထီးများကဖော်ပြခဲ့သည်တွေထက်ပိုပြီးမကြာခဏ Web-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က) သတင်းပေးပို့  ။ ထို့အပွငျတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်အမည်းစက်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအုပ်စုများရှိလူများ, ထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းမမှန်အဖြစ်ကျန်းမာရေးမညီမျှမှု, [၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာ53] နှင့်စိတ်ကျရောဂါ .
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျဘာစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ခံစားချက်, ပူးတွဲမှုစတိုင်နှင့် Impulse, အကောင့်ထဲသို့အသက်တာအားဖြင့်လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကို (လိင်ကွဲ, လိင်တူဆက်ဆံသူအပါအဝင်အများအပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် psychopathological အချက်များ, အကြားလင့်များအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ် ဘာအသုံးပြုသူများသည်၏) ရိုးရိုး။ ကျနော်တို့ဘာစွဲရက်တွင်ရွေးချယ်ထားသော variable တွေကိုတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
သင်တန်းသားများကိုအထူးပြုဖိုရမ်များနှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ငြာကနေတဆင့်စုဆောင်းကျဘာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဖိုရမ်များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကို (ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, ချက်တင်ခန်းများနှင့်ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များ) ၏ပါဝင်သည်။ ပါဝင်စေရန်, သင်တန်းသားများကို 18 အသက်အနှစ်ထက် ပို. ဖြစ်ဖို့နဲ့မေးခွန်း (French သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်) ၏ဘာသာစကားများကိုနားလည်ခဲ့ရသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့အဘယ်သူမျှမမက်လုံးပေးရှိခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏, ပြီးတော့ SurveyMonkey လင့်များကနေတဆင့်အမည်ဝှက်ပြီးမေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုတုံ့ပြန်မှုလုံခြုံတဲ့-Secure Sockets Layer-encrypted connection ကိုကျော်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက် protocol လိပ်စာများကိုသာနှစ်ဆပါဝင်မှုစစ်ဆေးသည်မှအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကို '' အမည်များ, အမည်ဝှက်, သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး, နှင့်ဒေတာအမည်ဝှက်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု protocol ကိုဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏ Ethical ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစုဆောင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 761 သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏ဘယ်သူကို၏လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ link ကိုနှိပ်ခြင်းအား 605 လူတွေအတွက်ရလဒ်။ အဆိုပါပါဝင်သူပြီးစီးမှုနှုန်းမေးခွန်းလွှာ၏အရှည်တစ်လျှောက်လျော့နည်းသွားသည်။ သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏သူ 605 ဘာသာရပ်များအနက် 358 အဆိုပါအသက်အပိုင်းအခြားအပိုင်းအတိတ်ဆက်ပြောသည်။ သာ 226 ဘာသာရပ်များ, နောက်ဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းကိုရန်မေးခွန်းလွှာအပိုင်းဆက်ပြောသည်။ ပျောက်ဆုံးတန်ဖိုးများကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးနမူနာ 145 သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်။
အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS)  14 (ဘယ်တော့မှ) မှ5အထိတစ်ဦး 0-အမှတ် Likert စကေး (အလွန်မကြာခဏ) ရက်နေ့တွင် rated4ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များကိုပိုမိုပြင်းထန်စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုညွှန်ပြ။ ယခင်လေ့လာမှုများအချိန်ကိုဖြတ်ပြီးကောင်းသော factorial တည်ငြိမ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာကိုဖြတ်ပြီး  ။ အဆိုပါစကေးထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, အဆက်မပြတ်, ရုပ်သိမ်းရေး, ဖြေရှင်းနှင့်ပဋိပက္ခအဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာနှင့် CIUS ၏ဘာသာစကားသက်တမ်းရှိခုနှစ်တွင်တစ်ဦး 1-Factor ဖြေရှင်းချက်ထပ်တလဲလဲ [အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်မော်ဒယ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားခံခဲ့ရပါတယ်55-59] ။ အဆိုပါ CIUS ၏ပစ္စည်းများ (ဆိုလိုသည်မှာ "သင်ကခက်ခဲသင်အွန်လိုင်းအခါအင်တာနက်သုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့တွေ့ပါသလား?") အင်တာနက်အထွေထွေအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးကြည့်ပါ။ စိတ်အတွက်စကားလုံးစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်အထူးသဘာလှုပ်ရှားမှုများအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သင်တန်းသားများကိုမေးသော် အင်တာနက် အထူးသဘာအသုံးပြုမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါ CIUS နှင့်အခြားအင်တာနက်စွဲလမ်းကြေးခွံယခင်ကအောင်မြင်စွာအင်တာနက်ဂိမ်းကစား, အင်တာနက်လောင်းကစားဝိုင်းအကဲဖြတ်ရန်တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ပြီ  နှင့်ကျဘာ [20,61] သူတို့ရဲ့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ၏ပွောငျးလဲစရာမလိုဘဲ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory
တစ်ဦး Likert စကေးအပေါ် 14 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် (ဥပမာ, "သင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုလူတစ်ဦးကိုမြင်သောအခါ, သင့်အလိုဆန္ဒဘယ်လိုတန်ခိုးကြီး?") .
လေးပစ္စည်းများကို0(ကတစ်ရက်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး) မှ7(မမှာအားလုံး) မှသွင်းယူနေကြသည်။ အခြားပစ္စည်းများ9(မျှအလိုဆန္ဒ) မှ0(ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒ) အထိတစ်ဦး 8-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ဖြေကြားကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော SDI ရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထုတ်ဖေါ်။
အဆိုပါက Short စီးပွားပျက်ကပ်-ပျော်ရွှင်မှုစကေး (SDHS) စိတ်ကျရောဂါခံစားချက်ကနေခံစားချက်အပြောင်းအလဲအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် (ဥပမာ, "ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုနှင့်အတူမကျေနပ်သလိုခံစားရတယ်") ပျော်ရွှင်မှုကိုမှ (ဥပမာ, "ငါပျော်ရွှင်ခံစားခဲ့ရ") သည်လွန်ခဲ့သော7ရက်ကြာကာလအတွင်း။ ဒါဟာ6(ဘယ်တော့မှ) မှ3(မကြာခဏ) အထိတစ်ဦး 3-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated4အပြုသဘောနှင့်0အနုတ်လက္ခဏာ3ပစ္စည်းများ, ပါဝင်ပါသည်။ စီးပွားပျက်ကပ်လက္ခဏာတွေမြင့်, ရမှတ်အောက်ပိုင်း .
ဤသည်အတွေ့အကြုံများအားပိတ်ရန်အတွက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး-Revised (ECR-R) မေးခွန်းလွှာ [ပူးတွဲမှုစတိုင်အကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်64,65] ။ အဆိုပါစာရင်းရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြောက်ရွံ့နှင့်အနိမ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုရှောင်ကြဉ်ပူးတွဲမှုများအတွက်ဆုံးရှုံးမှုပိုင်ဆိုင်မှုမေတ္တာနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစိုးရိမ်ပူးတွဲမှုအတှကျအ 18 ပစ္စည်းများ (ဥပမာ "ကျွန်မမကြာခဏငါ့အဖက်သည်ငါနှင့်အတူနေဖို့ချင်မည်မဟုတ်ကြောင်းစိတ်မပူပါနဲ့") နှင့် 18 ပစ္စည်းများပါဝင်သည် အောင်မြင်မှု (ဥပမာ "ငါနက်ရှိုင်းချခံစားရပုံကိုတစ်ဦးဖက်ကိုပြခြင်းငှါမကြိုက်တတ်တဲ့") ။ အဆိုပါပစ္စည်းများ7မှ 1 (လုံးဝသဘောမတူ) (လုံးဝသဘောတူ) မှအထိတစ်ဦး 7-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated နေကြသည်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ [ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်နီးစပ်အဖော်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေ့စဉ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း၏အခြား ratings အတူ subscale ရမှတ်များကောင်းတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့ပြသ66].
အရေးတကြီး, ပုခုံးတွ (မရှိခြင်း), ဇွဲရှိခြင်း (မရှိခြင်း), Sensation ရှာ, အပြုသဘောဆောင်သောအရေးတကြီး) Impulse အပြုအမူစကေး Impulse အပြုအမူစကေး
အဆိုပါ UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး  ၎င်း၏အတို 20-item ကိုဗားရှင်း 5အတိုင်းအတာအရသိရသည် Impulse တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်: (ပြင်းထန်သောအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကြုံနေရစဉ်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှု) အပြုသဘောဆောင်သည့်အရေးတကြီးအနုတ်အရေးတကြီး (အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုပြင်းထန်သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကြုံနေရစဉ်ဥပမာ, "ငါစိတ်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းကိုသည့်အခါကျွန်မမကြာခဏစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပြုမူ"), ပုခုံးတွမရှိခြင်း (သရုပ်ဆောင်ရှေ့တော်၌ထိုအကျိုးဆက်များကိုမထီမဲ့မြင်မပြုရန်သဘောထားကို), ဇွဲမရှိခြင်း (အခက်အခဲတည်းခိုခက်ခဲတဲ့သို့မဟုတ်ပျင်းစရာတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်) နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ။ တုံ့ပြန်ချက် (လုံးဝသဘောမတူ)4(ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) မှ 1 အထိတစ်ဦး 4-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated နေကြသည်။ ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု-retest တည်ငြိမ်မှုယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့သည်  ။ ယင်း၏ multicomponents ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာစကေး [စှဲ၏အကဲဖြတ်များအတွက်အထူးစိတျဝငျစားခဲ့68] ။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေထဲမှာ, Impulse ရှုထောငျ့အချို့အထူးသဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီးထဲမှာ, UPPS-P ကိုနှင့်အတူအကဲဖြတ် [69-72] နှင့်, ထိုအကဲဖြတ်အပြုအမူတွေနဲ့နမူနာပေါ် မူတည်. အပြုသဘောအရေးတကြီး  ပုခုံးတွမရှိခြင်း  ဇွဲမရှိခြင်း  နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံ  ယခင်ကစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
ဤသည် 1-ကို item စကေး ( "ငါမွငျ့မား Self-လေးစားမှုရှိ") [ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်74] ။ သင်တန်းသားများကို5(ငါ့ကိုအလွန်စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်) ကနေ 1 (ငါ့ကိုအလွန်မှန်) အထိတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert စကေးပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းကို item ဖြည့်စွက်။ အဆိုပါ Single-Item ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေး (SISE) [ထိုကဲ့သို့သော Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေးအဖြစ် Self-လေးစားမှု၏အခြားအကဲဖြတ်နှင့်အတူကောင်းသော convergence တရားဝင်မှုပြသ74] ။ ကြောင့် SISE ၏ Single-ကို item ဖွဲ့စည်းမှုရန်, ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောလို့ယူဆတယ်နှင့်ခန့်မှန်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနမူနာမှာတော့ဒီစကေးပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်, ကျားမ (အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး), အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ (တစ်ခုတည်းတစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေး-လက်ထပ်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေး-မဟုတ်လက်ထပ်, မုဆိုးမ, ဒါမှမဟုတ်မုဆိုးဖို၌) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်း (ဘာသာရပ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြထားရှိမရှိမေးမြန်းခြင်းမေးခွန်းတစ်ခုနှင့်အတူတိုင်းတာ လိင်ကွဲ, လိင်တူဆက်ဆံသူ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး) ကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Wilcoxon ရာထူးပေါင်းလဒ်စမ်းသပ်အသက်အရွယ်များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်သော်လည်းမှုကြောင့်လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး status ကိုများအတွက်အသေးစားနမူနာအရွယ်အစား, အသက်အပိုင်းအခြားသည် Fisher ကအတိအကျစမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ (ကသာ 10 ပစ္စည်းများရှိပါတယ်ကြောင့် SDHS များအတွက် 16.6%) ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းများထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်တစ်တိကျသောအတိုင်းအတာပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စည်း 6% နဲ့ညီမျှကိုယ်စားပြုအခါကွဲပြားခြားနားသောအကြေးခွံ, နှငျ့ ပတျသကျ. ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဖြေဖို့ဘာသာရပ်၏တုံ့ပြန်မှုများယုတ်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့သည် ကြောင်းစကေး (လူတစ်ဦး-ယုတ်ရှိသည်ဟုမှတ်စရာ) ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများ။ internal ကိုက်ညီမှု [Cronbach alpha နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်75] ။ အဆိုပါ CIUS အပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောရမှတ်တွေနဲ့ဆက်စပ် variable တွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦး linear ရောထွေးမော်ဒယ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမှီခို variable ကိုပု CIUS ရမှတ်ကြီးနှင့်လွတ်လပ်သော variable တွေကိုပု SDI ရမှတ်သည် SDHS ရမှတ်သည် ECR-R ကို subscales, အ UPPS-P ကို ​​subscales, အ SISE, လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ဖြစ်ကြသည်။ လိင်နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်သက်တမ်းကိုလည်းမော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ မွေးသူတို့ရဲ့တစ်နှစ်သတင်းပို့ခဲ့ပါဘူးသူကို 19 ဘာသာရပ်များရှိခဲ့သည်အမျှအသက်အရွယ်မော်ဒယ်အတွက်မပါဝင်ခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်နှင့် CIUS ရမှတ်အကြားဆက်စပ်မှု0နီးစပ်ခဲ့စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ဘက်လိုက်မှုမိတ်ဆက်ပေးမပေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးက linear ရောထွေးမော်ဒယ် [တဲ့ဂန္ထဝင် linear ဆုတ်ယုတ်၌ရှိသကဲ့သို့ fixed သက်ရောက်မှုများနှင့်ကျပန်းသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးင်တစ်ဦးစာရင်းအင်းမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်76] ။ ကျပန်းသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်စပျစ်သီးပြွတ်ဒေတာအတွက်အသုံးဝင်သောပါ၏ ကလေ့လာတွေ့ရှိချက်များလွတ်လပ်ရေး၏မရှိခြင်းများအတွက်အကောင့်အဖြစ်ထိုကြောင့်, မော်ဒယ်၏ဤအမျိုးအစားဆက်စပ်တိုင်းတာသင့်လျော်သည်။ ဒီနမူနာခုနှစ်တွင်ကြောင့်မေးခွန်းလွှာ၏ပြင်သစ်ဗားရှင်းအတွက်ဖြည့်တဲ့သူဘာသာရပ်များမေးခွန်းလွှာ၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းဖြည့်တဲ့သူဘာသာရပ်များထက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပိုမိုဆင်တူခဲ့ကြသည်ယူဆနိုင်, ထို့ကြောင့်, ဘာသာစကားကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်လုပ်ပါတယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်ပြီးမော်ဒယ်ခိုင်လုံသောခဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့ကျန်နေတဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် collinearity ရောဂါရှာဖွေရေးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျန်နေတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမရှိအစွန်းရောက်တန်ဖိုးများ ရှိ. , သူတို့ homoscedastic ခဲ့ကြသည်ကြောင်းကို, အကြွင်းအကျန်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြကြောင်းအသေးစိတ်ပြသသည်။ collinearity ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမရှိကှဲလှဲငွေကြေးဖောင်းပွမှုအချက်တစ်ချက် [အဘယ်သူမျှမ collinearity ပြဿနာများစည်းဝေးသောအကြံပြုထားတဲ့4ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့77] ။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း [R ကို 3.1.0 (R ကို Core ရေးအဖွဲ့, 2014) နဲ့ပြုမိခဲ့ကြ78] ။ အထုပ် nlme (R ကို Core ရေးအဖွဲ့, 2017) ကို linear ရောထွေးမော်ဒယ်ကို run ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှု 145 သင်တန်းသားများပါဝင်ပတ်သက်။ ကျနော်တို့က 145 ကအနည်းဆုံးသူတို့ရဲ့အသက်, လိင်, နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ထောက်ပံ့သောသူတို့နှင့်အတူဘာသာရပ်များပါဝင်သည့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာမရှိစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 သင်တန်းသားများကို၏အသက်အပိုင်းအခြားပြသထားတယ်။ နမူနာ 60.0% (87 / 145) ယောက်ျားနှင့် 40.0% (58 / 145) အမျိုးသမီးတွေရေးစပ်ခဲ့သည်။ နမူနာများ၏ပျမ်းမျှအသက် 31 နှစ်ပေါင်း (18-70 နှစ်ပေါင်းအကွာအဝေး) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ, အသီးသီးယောက်ျား (28 နှစ်ပေါင်း vs 36.5 နှစ်ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြ P= .014) ။ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်. တက်ရောက်လာသူများ၏ 37.9% (55 / 145) ဆက်ဆံရေး-မဟုတ်လက်ထပ်, 39.3% (57 / 145) ဆက်ဆံရေး-လက်ထပ်၌, 20.7% (30 / 145) တစ်ခုတည်း ရှိ. , 2.1% (3 / 145) မုဆိုးမသို့မဟုတ်မုဆိုးမ။ လိင်အတွင်းလိင်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ကိုလည်းတိုင်းတာခဲ့ကြသည်: သင်တန်းသားများကို၏ 77.9% (113 / 145) ရိုးရိုးဖြစ်ခြင်းလိင်ကွဲဖြစ်ခြင်း, 7.6% (11 / 145) ဖြစ်ခြင်းလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် 14.5% (21 / 145) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လူတို့တွင်, 79% (69 / 87) ရိုးရိုးဖြစ်ခြင်းလိင်ကွဲဖြစ်ခြင်း, 6% (6 / 87) ဖြစ်ခြင်းလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် 13% (12 / 87) သတင်းပေးပို့; အမြိုးသမီးမြားအကြား, 75% (44 / 58) ရိုးရိုးဖြစ်ခြင်းလိင်ကွဲဖြစ်ခြင်း, 8% (5 / 58) ဖြစ်ခြင်းလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် 15% (9 / 58) ကဖော်ပြခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ သင်တန်းသားများကို၏အသက်အပိုင်းအခြား။
စားပွဲတင်2[သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အ SDs အသုံးပြုသောတူရိယာအဖြစ် Cronbach alpha ပြသ75] အတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုအတိုင်းအတာနှင့်၎င်း၏ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလအဖြစ်။ ကိရိယာတိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သော (> 0.80) ကောင်းမွန်သော (> 0.90) အတွင်းကိုက်ညီမှုရှိသော်လည်း UPPS-P ၏အပြုသဘောဆောင်သောအရေးပေါ်စကေးသည်လက်ခံနိုင်သောအကွာအဝေး (> 0.70) သို့ကျသည်။
အဆိုပါ Linear ရောနှောထားသော Model ရဲ့ရလဒ်များ
အဆိုပါ linear ရောထွေးမော်ဒယ်၏ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံထားပါသည် စားပွဲတင် 3။ အဆိုပါ CIUS ရမှတ်များပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးလွှမ်းမိုးမှု (စံကိန်းကိုကြည့်ပါ) ပိုမိုမြင့်မားကိုရှောင်ကြဉ်ပူးတွဲမှုစတိုင်ရမှတ်များ, အထီးလိင်, နှင့်အဆင့်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ( ပို. စိတ်ကျရောဂါရမှတ်အဓိပ်ပာယျ) အနိမ့် SDHS ရမှတ်များရှိကြ၏။ အခြား variable တွေကို (စိုးရိမ်ပူးတွဲမှု, UPPS-P ကို ​​subscales, SIUS, လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အကြားအပြန်အလှန်) ကို CIUS ရမှတ်များပေါ်တွင်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူး။
စားပွဲတင်2။ အဆိုပါတူရိယာ၏ဖော်ပြချက်။
စားပွဲတင်3။ အဆိုပါ linear ရောထွေးမော်ဒယ်၏ရလဒ်များ။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအကောင့်ထဲသို့အသက်, လိင်, နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ယူပြီးအသုံးပြုပုံအမည်ရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ခံစားချက်, ပူးတွဲမှုစတိုင်နှင့် Impulse, ဘာစွဲလေ့လာဖို့နဲ့ဘာစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆုံးအဖွတျအကြားလင့်များအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့သည် ဘာအသုံးပြုသူ။ အဆိုပါ CIUS အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အဆင်ပြေအောင်, ထိုစွဲလမ်းကျဘာအသုံးပြုမှုကိုနိဂုံးချုပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိတ်ကျရောဂါခံစားချက်တစ်ခုကိုရှောင်ကြဉ်ပူးတွဲမှုစတိုင်နှင့်အထီးကျားနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင်3(စံကိန်း), အရလဒ်များ CIUS ရမှတ်များပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှရှောင်ရှားပူးတွဲမှုစတိုင်, အထီးကျား, မများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ UPPS-P ကို ​​Impulse subscores, Self-လေးစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်စွဲလမ်းကျဘာပေါ်တွင်သိသိသာသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အရေးပါသော drive ကိုသည်နှင့်အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုရငျးနှီးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်  ။ ဤလေ့လာမှု၌, မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသိသိသာသာစွဲလမ်းကျဘာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် [အဆိုပါဆန္ဒပြည့်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်26] နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် porn တွေကိုအဘို့ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal နှင့်တဏှာအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖေါ်ပြခြင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ  ။ ရလဒ်စွဲလမ်းကျဘာအသုံးပြုမှုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သောအပြုသဘောအားကောင်းဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုလည်း [စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များနှင့်ပတ်သက်သော၎င်း၏ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်လူသိများသည်81] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း, ဘာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအတက်အကျဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု. အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အကဲဖြတ်နိုင် .
ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းကျဘာအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များစွဲလမ်းကျဘာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများကွဲပြားခြားနားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခံစားချက်အကြားလင့်များ၏အရေးပါမှုကိုပြသသောအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူအရတော့ဖြစ်ပါတယ် [22,26] ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ဂိမ်းကစားအကြားအသင်းအဖွဲ့၏အခြားအစီရင်ခံစာများနှင့်အညီလည်းဖြစ်ပါတယ်  သို့မဟုတ်အင်တာနက်လောင်းကစားဝိုင်း  နှင့်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များ။ ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့များ [စွဲလမ်းကျဘာမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုအမူကြောင်းအကြံပြု20,35,36,84] ။ အခြားသောအင်တာနက်စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အတိုင်းဤတွေ့ရှိချက် [အနေနဲ့သင့်လျော်တဲ့ရောဂါရှာဖွေမူဘောင်အကြောင်းကို, ထိုစကားစစ်ထိုးပွဲဖွင့်လှစ်16] နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့၏လုံလောက်သောနားလည်မှု  ။ စွဲလမ်းစေကျဘာ (အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလူ့အထီးကျန်မှုတွေနဲ့လျော့ချရေး) ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမှအလယ်တန်းပိုပြီးသိသာစိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့် psychopathological ဒုက္ခဆင်းရဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖွံ့ဖြိုးရေး, [ထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး86] ဤသို့နောက်ထပ်အလားအလာလေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
ငါတို့သည်လည်းစွဲလမ်းကျဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲဖိုင်ကိုပေမယ့်စိုးရိမ်ပူပန်မရပူးတွဲမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်မလုံခြုံပူးတွဲမှု၏သက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းကတခြားလေ့လာမှုသူတို့နှင့်အတူအရတော့များမှာ  နှင့်ကျဘာ  ။ Beutel et al  စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွယ်ကပ်မှု၏အရေးကြီးမှုနှင့်အတူအင်တာနက်လိင်သုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာသည်။ သို့သော်သူတို့၏ရလဒ်သည်အင်တာနက်လိင်သုံးစွဲမှု၏အရေးကြီးမှုနှင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည့်တွယ်ကပ်မှုကြားဆက်စပ်မှုအတွက်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် cybersex အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် Beutel et al ၏လေ့လာမှုတွင်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ “ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေသည်…”) နှင့်စွဲစေသည့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ “ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်လိင်စွဲလမ်းသူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်”) ကိုအသုံးပြုသည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မိမိကိုယ်ကိုကတိပေးခဲ့သည်။ ) ထို့အပြင်ပစ္စည်းများကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ detect လုပ်ဖို့ကန့်သတ်စေခြင်းငှါအရာ, dichotomous စကေး (စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မှားယွင်းသော) ရှိကြ၏။ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်တွေ့နိုင်သောဆက်စပ်မှုကိုမကျေနပ်မှုများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကရှင်းပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆက်မှုများတွင်ဆက်ဆံရေးတွင်ရင်းနှီးမှုနည်းပါးခြင်းပါဝင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာစွဲလမ်းစေ cybersex နှင့်စိုးရိမ်ပူပန် attachment ကိုစတိုင်အကြားအသင်းအဖွဲ့မရှိခြင်းကြောင့်အရွယ်အစားအတွက်ကန့်သတ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိကျသော cybersex လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပူးတွဲပါပုံစံနှင့်ကွဲပြားမှုကိုမှန်းဆနိုင်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်ငြင်းပယ်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမိတ်ဖက်များနှင့် Web-based အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရှိနိုင်သည်) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအသေးစိတ်အတွက်တိကျတဲ့ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလှုပ်ရှားမှုများအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများအကြားထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားမှုများရှိလင့်ကစားမလုံခြုံသောချိတ်ဆက်မှုပုံစံများသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ တခြားနေရာအကြံပြုအဖြစ် , ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်စွဲလမ်းကျဘာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောလူနာတွေအတွက်ပူးတွဲမှုစတိုင်လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ကုသမှုခံထိုက်။
Impulse နှင့်ကျဘာစွဲသိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ အဆိုပါ UPPS-P နှင့်အင်တာနက်-related စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအကြားလင့်များနှင့် ပတ်သက်. အခြားအလေ့လာမှုသူတို့နှင့်အတူလက်ဆနျ့ကငျြဘမှာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို [21,45] ။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို [စွဲလမ်းကျဘာနဲ့ Impulse အကြားအချို့အသင်းအဖွဲ့များဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများ၏သူတို့အားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြ၏20,46] ။ ထို့အပွငျ [အတူတူ UPPS-P ကိုစကေး Wery et al သုံးပြီး20] အထီးသင်တန်းသားများ၏အုပ်စုတစုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူအပြန်အလှန်အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီးစွဲလမ်းကျဘာခန့်မှန်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်ပြသခဲ့သည်။ စာရေးသူ '' တို့ကပြထားတဲ့အတိုင်းသို့သော်အသင်းအဖွဲ့များ၏အစွမ်းသတ္တိကိုခိုင်ခံ့မဟုတ်ခဲ့ 1.03 (95% CI = 1.01-1.06) ၏လေးသာမှုအချိုးအစားကဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ Wetterneck et al  Impulse တစ်အတိုင်းအတာနှင့်ရက်သတ္တပတ်များကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီအရေအတွက်ကများအကြားသေးငယ်တဲ့ဆက်စပ်မှုကိုပြတော်မူ၏။ သို့သော်သူတို့စွဲလမ်း porn အသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အကြား Impulse အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။
လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌တပါးအချို့ Impulse ရှုထောငျ့ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးအဓိကပစ်မှတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမလိုဘဲစွဲလမ်းကျဘာမှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါ hypothesize လိမ့်မည်။ ဤသည်လေ့လာမှုများအကြားညီမျှမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်နိုင်သည်နမူနာအရွယ်အစား, ကျဘာလှုပ်ရှားမှုများများ၏တိကျသောပုံစံ (ဆိုလိုသည်မှာ, porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ချိန်းတွေ့အကြားဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားမှု), နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားအကဲဖြတ်လွှမ်းမိုးမှုနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကို attachment ၏အတိုင်းအတာသည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လေ့လာမှုများတွင်ထည့်သွင်းမ Construction ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးချင်းသီးခြားကျဘာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါသို့သျောကြှနျုပျတို့ [အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး24] သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်နှင့်ကျဘာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်း  ။ စွဲလမ်းစေကျဘာအတွက် Impulse Construction ၏ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ထပ်မံလေ့လာမှုများလိုအပ်နေပါသည်။
self-လေးစားမှု CIUS ရမှတ်များပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်ကိုပြသသောအခြားလေ့လာမှုများသူတို့ဆန့်ကျင်ဥပမာ, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက် sexting အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများဝေမျှခြင်း)  ။ လေ့လာမှုများအကြားဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုဘာလို့လဲဆိုတော့နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများ, သင်တန်းသားများကို '' တိကျသောကျဘာလှုပ်ရှားမှုများ, သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကဥပမာ, သာ 1 ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အတူယေဘုယျ Self-တန်ဖိုးထားအကဲဖြတ်။ ထို့အပွငျ Self-လေးစားမှုအပေါ်တိကျသောကျဘာလှုပ်ရှားမှုများများ၏သက်ရောက်မှုထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာအကဲဖြတ်ကိုကြောက်ရွံ့အဖြစ်သက်ရောက်မှု၏ဖြစ်နိုင်သောပြုပြီအပါအဝင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် Self-လေးစားမှု, အကြားလင့်များအပေါ်အလားအလာလေ့လာမှုများ  လိုအပ်နေပါသည်။
အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိရထားသည်အတိုင်းဤလေ့လာမှုလည်း [, စွဲလမ်းကျဘာနဲ့အထီးကျားမအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပြသ17,42,46,87,88] ။ Sociocultural ကွဲပြားခြားနားမှုဒီဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, လိင်စိတ်နိုးထ, သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုတွေအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိခြားနားချက်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ  ။ အဆိုပါလိင်-related ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ apps များကိုလည်းကျဘာအသုံးပြုမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ကျား, မကွဲပြားမှုလေ့စွဲလမ်းမမှန်အစီရင်ခံကြသည် ဟူ. ၎င်း, အပိုဆောင်းလေ့လာမှုများ [အခြေခံယန္တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်90].
ဘာအသုံးပြုသူလူဦးရေအနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအသက်အရွယ်နှင့်ကျဘာစွဲအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်။ ဘာအပေါ်အများစုကလေ့လာမှုများ [မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ17] ။ (အစောပိုင်း 2000s အတွက်) အခြို့အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, သို့သော်, [50 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးလူကြီးများအငယ်လူကြီးများထက်ကျဘာအသုံးပြုမှုလျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြသ91] ။ ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များဖြစ်နိုင်သည်ကျဘာစွဲ (နှင့်မကျဘာအသုံးပြုမှုအပေါ်) နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆင့်ကဲအပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအတွင်းအင်တာနက်ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြင့်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်ရှင်းပြထားသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာ, လိင်အဆိုပါအကဲဖြတ်အပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အလားတူပင်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အကြားအပြန်အလှန်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, လိင်သာ3အဓိကအမျိုးအစား (လိင်ကွဲ, ရိုးရိုးနှင့်လိင်တူဆက်ဆံ) တွင်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ပိုပြီးသန့်စင်ပြီးအကဲဖြတ်ခြင်းမှအကျိုးရှိမည်ဟု  နှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးယဉ်နှင့်လူမှုရေး interaction က)  အဖြစ်ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်ရောက်သောအကဲဖြတ်ထံမှ .
ဘာ [အသုံးပြုသူများကိုသာသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်20] ။ ဤသည်လေ့လာရေးကိုလည်း (ထိုအတောအတွင်းခြင်းဖြင့်သရုပ်ဖော်နေသည်စားပွဲတင် 2) နှင့်ဒီလေ့လာမှုအတွက် CIUS ရမှတ်များ၏ပျမ်းမျှ (13 ၏ 56) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အသုံးပြုခြင်း၏စွဲလမ်းပုံစံများနှင့်အတူသူတို့အဘို့, ကုသမှုရွေးချယ်စရာနေဆဲကျဲခြင်းနှင့်ခွဲပါ၏ လယ်ပြင်၌အနည်းငယ်ပဏာမလေ့လာမှုများအများစု [ပြီးသားစွဲလမ်းမမှန်များ၏ psychotherapy ကနေလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုမျိုးပွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ12].
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါဟာအများအပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးဆက်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျဘာစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်ပုံရသည်။ အထူးသဖြင့်အာရုံကိုပူးတွဲမှု၏လူနာရဲ့ပုံစံများအားပေးပြီးမှရပါမည်။ Psychotherapeutic ကုသမှုတစ်ခုချင်းစီစိတ်ရှည်၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုက်ညီခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲမှုနှင့်အတူပြည်သူ့ဥပမာ, စွဲလမ်းနှင့်ပူးတွဲမှုနှောင့်အယှက်များကုသမှုပေါင်းစည်းဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခု psychotherapeutic ချဉ်းကပ်မှုမှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာစွဲ၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုများအတွက်အနာဂတ်လေ့လာမှုများလက်တွေ့ setting တွင်လိုအပ်နေပါသည်။
လေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ နမူနာလေ့လာမှုစာရင်းဇယားများအတွက်အတော်လေးသေးငယ်ပေမယ့်လုံလောက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်နမူနာ [Self-Selection ကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်94] ။ အဆိုပါ Cross-Section ဒီဇိုင်းအကဲဖြတ် variable တွေကိုအကြား longitudinal ဆက်စပ်မှုတွေ၏အကဲဖြတ်ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ ထို့အပြင်ထိုလေ့လာမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူများနှင့်ကျဘာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတလွှားဘာအသုံးပြုမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောကျဘာလှုပ်ရှားမှုများမယူခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျဘာစွဲမှ related မျှသဘောတူညီမှုလည်းမရှိ, ထို့ကြောင့်ယင်းလေ့လာမှု CIUS တစ်ဦးကို proxy အဖြစ်ကျဘာမှအဆင်ပြေအောင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ချဉ်းကပ်မှုထက်အမျိုးအစားများထဲမှအသုံးပြုခြင်း, သို့သော်, အင်တာနက်ကိုအပ်န်ဆောင်မှုများစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောကာလုံလောက်သောသုတေသနတူရိယာနှင့်အတူစွဲလမ်းကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြင်းထန်မှုအချို့ပြဋ္ဌာန်းအကဲဖြတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဤအကန့်သတ်နေသော်လည်း, ဒီလေ့လာမှုစွဲလမ်းကျဘာတစ်ခုမှရှောင်ရှားပူးတွဲမှုစတိုင်, စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကလွှမ်းမိုးကြောင်းဖော်ပြသည်။ အထီးတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။ self-လေးစားမှုနှင့် Impulse စွဲလမ်းကျဘာပေါ်တွင်သိသိသာသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့မထင်ကြဘူး။ အလားအလာလေ့လာမှုများအပါအဝင်နောက်ထပ်သုတေသန, လယ်ပြင်၌လိုအပ်သည်။
NV, YK, FBD နှင့် SR လေ့လာမှုအယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ SR, YK နှင့် NV စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အချက်အလက်များ၏အနက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ TL, KJ နှင့် YK သင်တန်းသားများ၏စုဆောင်းမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ NV, YK, KJ, TL, SR နှင့် FBD လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အရေးအသားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
Khazaal Y ကို, Chatton တစ်ဦးက, Cochand S က, Jermann က F, Osiek ကို C, Bondolfi, G, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ် web-based အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေး။ J ကို Gamble လုံး 2008 စက်တင်ဘာ; 24 (3): 357-366 ။ [CrossRef] [Medline]
ဗန်အဆိုတော် M က, Chatton တစ်ဦးက, ရောဂါစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်ဆက်စပ်သောစမတ်ဖုန်း app များ Khazaal Y. အရည်အသွေး။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2015 ဇူလိုင် 14; 6: 96 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Greiner ကို C, Chatton တစ်ဦးက, ဆေးခြောက်ရက်နေ့တွင် Khazaal Y. အွန်လိုင်း Self-အကူအညီနဲ့ဖိုရမ်များ: အကြောင်းအရာအကဲဖြတ်။ လူနာ Education Couns 2017 အောက်တိုဘာ; 100 (10): 1943-1950 ။ [CrossRef] [Medline]
Zermatten တစ်ဦးက, Khazaal Y ကို, Coquard အို Chatton တစ်ဦးက, စိတ်ကျရောဂါအပေါ် web-based အချက်အလက်များ၏ Bondolfi G. အအရည်အသွေး။ ပူပန် 2010 စက်တင်ဘာစိတ်ကျရောဂါ; 27 (9): 852-858 ။ [CrossRef] [Medline]
ဗွန်ရို AJ, ဗွန်ရို FT, Tinnemann P ကို, Muller-Riemenschneider အက်ဖ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အင်တာနက်: မြီးကောင်ပေါက်အကြားအွန်လိုင်းဦးစားပေး၏ Cross-Section လေ့လာမှု။ J ကို Med အင်တာနက်ကို Res 2017 ဒီဇင်ဘာ 08; 19 (11): e379 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Döringမိုင်။ လိင်အပေါ်အင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှု: သုတေသန 15 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ ကွန်ပျူတာကလူ့ပြုမူနေ 2009 စက်တင်ဘာ 01; 25 (5): 1089-1101 ။ [CrossRef]
Shaughnessy K ကို Byers ES, လိင်ကွဲကျောင်းသားများ Walsh အယ်လ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံကို: ကျားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2011 ဧပြီ; 40 (2): 419-427 ။ [CrossRef] [Medline]
Grov ကို C, Gillespie BJ, Royce T က, လီဗာဂျေလိင်ကွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်ပေါ့ပေါ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအကျိုးဆက်များခံစား: အမေရိကန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2011 ဧပြီ; 40 (2): 429-439 ။ [CrossRef] [Medline]
Khazaal Y ကို, Chatton တစ်ဦးက, Rothen S ကို, အာဟပ်က S, Thorens, G, Zullino: D, et al ။ ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမန်စကားပြောအရွယ်ရောက်သူတို့တွင် 7-ကို item ဂိမ်းစွဲလမ်းစကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု 2016 မေလ 10; 16: 132 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Weinstein လေး။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတခုတခုအပေါ်မှာ update ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 စက်တင်ဘာ 29; 8: 185 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Petry မင်၊ O'Brien ကစီပါ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် DSM-5 ။ စွဲ 2013 ဇူလိုင်; 108 (7): 1186-1187 ။ [CrossRef] [Medline]
Wéryတစ်ဦးက, Billieux ဂျေပြဿနာဘာ: စိတ်ကူး, အကဲဖြတ်များနှင့်ဆက်ဆံမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2017 ဇန်နဝါရီ; 64: 238-246 ။ [CrossRef] [Medline]
Weinstein လေး, Zolek R ကို, Babkin တစ်ဦးက, Cohen ကိုငွေကျပ်, Lejoyeux အမ်ဘာ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအတွက်ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခက်အခဲများခန့်မှန်းအကြောင်းခံအချက်များ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2015 ဧပြီ 20; 6: 54 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Karila L ကို, Wéryတစ်ဦးက, Weinstein တစ်ဦးက, Cottencin အိုအသနားခံစာတစ်ဦးက, Reynaud M က, et al ။ လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ: တူညီသောပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ? စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Curr Pharm Des 2014; 20 (25): 4012-4020 ။ [CrossRef] [Medline]
Carnes PJ ။ ကျဘာ, ပိုးပန်းနှင့်မြင့်တက် arousal: စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်အချက်များ။ လိင်စွဲ compulsive 2011 အောက်တိုဘာ 13; 8 (1): 45-78 ။ [CrossRef]
Kraus SW, Voon V ကို, Potenza MN ။ တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စွဲ 2016 ဒီဇင်ဘာ; 111 (12): 2097-2106 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Ballester-Arnal R ကို, ကက်စထရို CJ Gil-Llario MD, Gil-ဂျူလီယာခကျဘာစွဲ: စပိန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2017 သြဂုတ် 18; 43 (6): 567-585 ။ [CrossRef] [Medline]
အစိမ်းရောင် BA, Carnes S က, Carnes PJ, Weinman EA ၏။ ဘာစွဲလိင်တူဆက်ဆံသူတစ်ဦးလက်တွေ့နမူနာပုံစံများ, လိင်ကွဲများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားမိန်းမတို့။ လိင်စွဲ compulsive 2012 ဇန်နဝါရီ; 19 (1-2): 77-98 ။ [CrossRef]
Eichenberg ကို C, Schott M က, နှစ်ထပ်, အို Sindelar ခနှောင်ကြိုးစတိုင်နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်း။ J ကို Med အင်တာနက်ကို Res 2017 မေလ 17; 19 (5): e170 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Wéryတစ်ဦးက, Deleuze J ကို, တှငျ Canale N ကို, Billieux ဂျေစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ဝန်ကိုထမ်းရွက် Impulse ယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2018 ဇန်နဝါရီ; 80: 192-201 ။ [CrossRef] [Medline]
et al Khazaal Y ကို, Chatton တစ်ဦးက, အာဟပ်က S, Monney, G, Thorens, G, Dufour M က။ အင်တာနက်ကလောင်းကစားသမားတွေလူမှုရေး variable တွေကိုအပေါ်ကွာခြား: တစ်ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Gamble လုံး 2017 စက်တင်ဘာ; 33 (3): 881-897 ။ [CrossRef] [Medline]
Bancroft J ကို, Vukadinovic Z. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ J ကိုလိင် Res 2004 သြဂုတ်; 41 (3): 225-234 ။ [CrossRef] [Medline]
ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါအမှတ်တံဆိပ် M က, Snagowski J ကို, Laier ကို C, Maderwald အက်စ် Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 2016 ဧပြီ 01; 129: 224-232 ။ [CrossRef] [Medline]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က, Young က KS, Laier C. Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ တပ်ဦး Hum neuroscience 2014 မေလ 27; 8: 375 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က, Laier ကို C, Pawlikowski M က, Schächtleဦး, Schöler T က, Altstötter-Gleich C. အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကဲခတ်: အလွန်အကျွံအင်တာနက်လိင်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ratings နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအခန်းကဏ္ဍ။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw 2011 ဇွန်; 14 (6): 371-377 ။ [CrossRef] [Medline]
Laier ကို C, Pekal J ကို, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အမ်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw 2014 သြဂုတ်; 17 (8): 505-511 ။ [CrossRef] [Medline]
Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S နဲ့, et al ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PLoS တစ်ခုမှာ 2014 ဇူလိုင် 11;9(7): e102419 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Laier ကို C, Pekal J ကို, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်ဘာစွဲဆုံးဖြတ်ရန်။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw 2015 အောက်တိုဘာ; 18 (10): 575-580 ။ [CrossRef] [Medline]
Levine SB ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏သဘောသဘာဝ: တစ် Clinician ရဲ့ရှုထောင့်။ Arch Sex Behav 2003 ဇွန်; 32 (3): 279-285 ။ [CrossRef] [Medline]
Bancroft J ကို, ဂရေဟမ်, CA, Janssen အီး, Sanders လုပ် SA ။ အဆိုပါ dual-ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်: လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ J ကိုလိင် Res 2009; 46 (2-3): 121-142 ။ [CrossRef] [Medline]
et al Bousoño Serrano M က Al-Halabí S က, Burón P ကို, Garrido က M, Díaz-Mesa EM, သွပ်ရည်စိမ်, G, ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှု, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, psychopathology နှင့်သတ်သေ ideation ။ Adicciones 2017 ဇန်နဝါရီ 12; 29 (2): 97-104 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်“ Sexting” နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည်။ J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး 2014 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ; 55 (6): 757-764 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Biolcati R. compulsive ဝယ်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာအကဲဖြတ်၏ Self-လေးစားကြောက်၏အခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 မေလ 02; 8: 74 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Andreassen CS, Pallesen S က, Griffiths က MD, Torsheim T က, Sinha R. ကြီးမားသောအမျိုးသားရေးနမူနာအတူဘာဂန်-ယေးလ်လိင်စွဲစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ တပ်ဦး Psychol 2018 မတ်လ 08; 9: 144 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
et al Zanetta Dauriat က F, Zermatten တစ်ဦးက, Billieux J ကို, Thorens, G, Bondolfi, G, Zullino: D ။ အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းကနေသက်သေအထောက်အထား: ကစားရန်တွန်းအားအထူးလွန်ကဲကဲ multiplayer အွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းထဲမှာအလွန်အကျွံပါဝင်ပတ်သက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ EUR စွဲ Res 2011; 17 (4): 185-189 ။ [CrossRef] [Medline]
Cooper ကတစ်ဦး, Galbreath N ကို, Becker ကနေ MA ။ အင်တာနက်အပေါ်လိင်: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူယောက်ျား၏ကျနော်တို့ရဲ့နားလည်မှု furthering ။ Psychol စွဲပြုမူနေ 2004 စက်တင်ဘာ; 18 (3): 223-230 ။ [CrossRef] [Medline]
Berry ဟာ K ကို Varese က F, အသံတွေကို၏ Bucci အက်စ်သိမှုပူးတွဲမှုမော်ဒယ်: သက်သေအထောက်အထားများအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အနာဂတ်ဂယက်ရိုက်။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 ဇွန် 30; 8: 111 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Falgares, G, Marchetti: D, De Santi က S, Carrozzino: D, et al Kopala-Sibley, DC, Fulcheri M က။ attachment စတိုင်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သတ်သေ-related အပြုအမူတွေ: Self-ဝေဖန်မှုများနှင့်မှီခိုများ၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 မတ်လ; 8: 36 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
မာကု KP, Vowel LM, Murray SH ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ကွဲပြားခြားနားနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်ပူးတွဲမှုစတိုင်လ်၏သက်ရောက်မှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2017 နိုဝင်ဘာ 22; 44 (5): 1-9 ။ [CrossRef] [Medline]
Weinstein A၊ Katz L၊ Eberhardt H၊ Cohen K၊ Lejoyeux အမ်။ လိင်၊ J ကို Behav စွဲ 2015 မတ်လ;4(1): 22-26 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Kor တစ်ဦးက, Zilcha-Mano မှ S က, Fogel YA, Mikulincer M က, ရိဒ် RC, Potenza MN ။ အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏ Psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2014 မေလ; 39 (5): 861-868 ။ [CrossRef] [Medline]
Beutel ME, Giralt S က, Wölfling K ကိုStöbel-ရစ်ချတာ Y ကို, et al Subic-Wrana ကို C, Reiner ငါ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဂျာမန်လူဦးရေတွင်အွန်လိုင်း-လိင်အသုံးပြုမှုပြဌာန်းခွင့်။ PLoS တစ်ခုမှာ 2017 ဇွန် 19; 12 (6): e0176449 ။ [CrossRef] [Medline]
Rochat L ကို, Billieux J ကို, Gagnon J ကို, neuropsychology အတွက် Impulse မှဗန် der Linden အမ်တစ်ဦးက multifactorial နှင့် Integrated ချဉ်းကပ်: Impulse ၏ UPPS မော်ဒယ်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Clin Exp Neuropsychol 2018 ဖေဖော်ဝါရီ; 40 (1): 45-61 ။ [CrossRef] [Medline]
Rothen S, Briefer J, Deleuze J, Karila L, Andreassen CS, Achab S, et al ။ ပြproblemနာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုမှုတွင်အသုံးပြုသူများ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာစရိုက်များ၏အခန်းကဏ္entangကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း။ PLoS တစ်ခုမှာ 2018 စက်တင်ဘာ 05; 13 (9): e0201971 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Billieux J ကို, Chanal J ကို, Khazaal Y ကို, Rochat L ကို, ဂေး P ကို, Zullino: D, et al ။ လွန်ကဲကဲ multiplayer အွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းအတွက်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်း: အထီးချက်တွေကိုဆိုင်ဘာကဖေးကစားသမားတစ်နမူနာပုံဥပမာ။ Psychopathology 2011; 44 (3): 165-171 ။ [CrossRef] [Medline]
Wetterneck မှန် CT, Burgess AJ, က Short ကို MB, Smith က AH, ME Cervantes ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, Impulse နှင့်အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychol ဖမ်းယူရေး 2017 မေလ 29; 62 (1): 3-18 ။ [CrossRef]
Billieux J ကို, Rochat L ကို, Ceschi, G, Carr တစ်ဦးက, et al Offerlin-Meyer ငါ Defeldre တစ်ဦး။ အဆိုပါ UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး၏တိုတောင်းတဲ့ပြင်သစ်ဗားရှင်း validation ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2012 ဇူလိုင်; 53 (5): 609-615 ။ [CrossRef] [Medline]
D'Orta I, Burnay J, Aiello D, Niolu C, Siracusano A, Timpanaro L, et al ။ တိုတောင်းသောအီတလီ UPPS-P Impulse အပြုအမူစကေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။ စွဲ Behav ကိုယ်စားလှယ် 2015 ဒီဇင်ဘာ 2: 19-22 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Cyders MA, Littlefield AK, Coffey က S, Karyadi Ka ။ အဆိုပါ UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး၏တိုတောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းစာမေးပွဲ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2014 စက်တင်ဘာ; 39 (9): 1372-1376 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Bteich, G, Berbiche: D, ရေတို Arabic အဘိဓါန် UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး၏ Khazaal Y. အတည်ပြုခြင်း။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 ဒီဇင်ဘာ 06; 17 (1): 244 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ် Defining တခု C. ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2016 ဧပြီ; 45 (3): 505-508 ။ [CrossRef] [Medline]
Ybarra ML, Mitchell က KJ ။ တစ်ဦးကအမျိုးသားရေးလိင်တူချစ်သူ၏လေ့လာမှု, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး (LGB), နှင့် Non-LGB လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအွန်လိုင်းနှင့် In-လူတစ်ဦး။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2016 သြဂုတ်; 45 (6): 1357-1372 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Roth EA ၏, Cui Z ကို, ဝမ် L ကို, အမ်းစထရောင်း HL, Rich AJ, Lachowsky NJ, et al ။ အရှိန်အဟုန်ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုမှာလိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျား၏ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပုံစံများ။ နံနက် J ကို Mens ကျန်းမာရေး 2018 စက်တင်ဘာ; 12 (5): 1759-1773 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
လီ Y ကို, ယွမ် Z ကို, ကလီ-Nolle K သည်, Jiangxi ပြည်နယ်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားယန်ဒဗလျူလိင်တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ။ အာရှ Pac J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2018 စက်တင်ဘာ 15: 1010539518800335 (လာမည့်) ။ [CrossRef] [Medline]
Meerkerk, G, ဗန် Den Eijnden RJ, Vermulst AA ကို, Garretsen HF ။ အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS): အချို့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Cyberpsychol ပြုမူနေ 2009 ဖေဖော်ဝါရီ; 12 (1): 1-6 ။ [CrossRef] [Medline]
et al Khazaal Y ကို, Chatton တစ်ဦး, ဦးချိုတစ်ဦးက, အာဟပ်က S, Thorens, G, Zullino: D ။ အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအတိုင်းအတာပြင်သစ် validation ကို (CIUS) ။ စိတ်ရောဂါမေး 2012 ဒီဇင်ဘာ; 83 (4): 397-405 ။ [CrossRef] [Medline]
Khazaal Y ကို, Chatton တစ်ဦးက, Atwi K ကို Zullino: D, Khan က R ကို, အ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) ၏ Billieux ဂျေ Arabic အဘိဓါန် validation ကို။ Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော Prev ပေါ်လစီ 2011 နိုဝင်ဘာ 29; 6: 32 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Guertler: D, Broda တစ်ဦးက, Bischof တစ်ဦးက, Kastirke N ကို, Meerkerk, G, ယောဟန်ဦး, et al ။ အဆိုပါ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအတိုင်းအတာ၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw 2014 ဇန်နဝါရီ; 17 (1): 46-51 ။ [CrossRef] [Medline]
Dhir တစ်ဦးက, ချန်က S, ထိုင်ဝမ်အထက်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူတရုတ် compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) ၏ Nieminen အမ် Psychometric validation ကို။ စိတ်ရောဂါမေး 2015 ဒီဇင်ဘာ; 86 (4): 581-596 ။ [CrossRef] [Medline]
Khazaal Y ကို, အာဟပ်က S, Billieux J ကို, Thorens, G, Zullino: D, Dufour M က, et al ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဖဲချပ်ဝေကစားသမားအတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်းစမ်းသပ်မှု၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ JMIR Ment ကျန်းမာရေး 2015 ဧပြီ 22;2(2): e12 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
ဒေါင်းနင်း Jr MJ, Antebi N ကို, Schrimshaw EW ။ အင်တာနက်-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ compulsive အသုံးပြုမှု: အ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး၏လိုက်လျောညီထွေနှင့် validation ကို (CIUS) ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2014 ဇွန်; 39 (6): 1126-1130 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Spector အိုင်ပီ, ကယ်ရီအမတ်, Steinberg အယ်လ်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒစာရင်း: ဖွံ့ဖြိုးရေး, အချက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အထောက်အထား။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 1996; 22 (3): 175-190 ။ [CrossRef] [Medline]
ယောသပ်သည်က S, Linley PA ဆိုပြီး, Harwood J ကို, Lewis က, CA, သုခချမ်းသာများ McCollam P. Rapid အကဲဖြတ်: အက Short စီးပွားပျက်ကပ်-ပျော်ရွှင်မှုစကေး (SDHS) ။ Psychol Psychother 2004 ဒီဇင်ဘာ; 77 (Pt 4): 463-478 ။ [CrossRef] [Medline]
Fraley RC, Waller Ng, နန် Ka ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပူးတွဲမှု၏ Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာတစ်ခုကို item တုံ့ပြန်မှုသီအိုရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Pers Soc Psychol 2000 ဖေဖော်ဝါရီ; 78 (2): 350-365 ။ [CrossRef] [Medline]
Lafontaine MF, Lussier Y. [မေတ္တာ၌ပူးတွဲမှု၏ Bidimensional ဖွဲ့စည်းပုံမှာ: ရငျးနှီး၏စွန့်ခွာနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်] ။ J ကိုပြုမူနေသိပ္ပံ 2003 ဇန်နဝါရီ 01 နိုင်သလား; 35 (1): 56-60 ။
Ravitz P ကို, Maunder R ကို, Hunter J ကို, Sthankiya B, Lancee ဒဗလျူအရွယ်ရောက်ပူးတွဲမှုအစီအမံ: တစ် 25 နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Psychosom Res 2010 အောက်တိုဘာ; 69 (4): 419-432 ။ [CrossRef] [Medline]
Whiteside SP, Lynam DR ။ ငါးအချက်မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ Pers Individ Dif 2001; 30 (4): 669-689 ။ [CrossRef]
တှငျ Canale N ကို, Vieno တစ်ဦးက, Bowden-ဂျုံးစ် H ကို, Billieux ဂျေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာ Impulse ၏ UPPS မော်ဒယ်ထက်ကြီးငါးခုကို အသုံးပြု. ၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ စွဲ 2017 ဒီဇင်ဘာ; 112 (2): 372-373 ။ [CrossRef] [Medline]
Coskunpinar တစ်ဦးက, ညွှန် AL, Cyders MA ။ Impulse နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအတွက် Multidimensionality: Impulse ၏ UPPS မော်ဒယ်သုံးပြီး Meta-analysis သည်။ အရက် Clin Exp Res 2013 စက်တင်ဘာ; 37 (9): 1441-1450 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
ဂွန် RL, ဂျက်ဆင် KM, Borsari B, Metrik ဂျေအပျက်သဘောဆောင်သောအရေးတကြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်ဆေးခြောက်ပြဿနာများအကြားဆက်ဆံရေးတွက်သည်။ နယ်စပ်ဒေသများ Personal disorders Emotion Dysregul 2018 မေလ 16; 5: 10 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
de-Sola J ကို, Talledo H ကို, Rubio, G, က de Fonseca FR ။ စပိန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းစွဲလမ်းတပ်မက်စကေးနှင့်၎င်း၏ validation ကို၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 မေလ 30; 8: 90 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Navas JF, Contreras-Rodriguez အို et al Verdejo-Roman J ကို, Perandrés-Gomez တစ်ဦးက, Albein-Urios N ကို, Verdejo-Garcia တစ်ဦး။ ရိုနှင့်လောင်းကစားရောဂါအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြု။ စွဲ 2017 ဇွန်; 112 (6): 1086-1094 ။ [CrossRef] [Medline]
et al Rømer Thomsen K ကို Callesen ကို MB, Hess က M, Kvamme TL, Pedersen MM, Pedersen MU ။ Impulse စရိုက်များနှင့်လူငယ်များအတွက်စွဲ-related အပြုအမူတွေ။ J ကိုပြုမူနေစွဲ 2018 ဇွန် 01;7(2): 317-330 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Robin R ကို, Hendin H ကို, Trzesniewski K. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုတိုင်းတာခြင်း: တစ် Single-item တခုကိုအတိုင်းအတာ၏အတညျပွုနှင့် Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေးတည်ဆောက်ရန်။ Pers Soc Psychol Bull 2001; 27 (2): 151-161 ။ [CrossRef]
Cronbach LJ, Meehl PE ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအတွက်တရားဝင်မှုတည်ဆောက်ရန်။ Psychol Bull 1955; 52 (4): 281-302 ။ [CrossRef]
မက်ကူလော့အီး, Neuhaus JM, Searle SR ။ Generalized linear ရောထွေးမော်ဒယ်များ။ Hoboken, နယူးဂျာစီ: Wiley; 2014 ။
Fox က J ကို, Monette G. အ Generalized collinearity ရောဂါရှာဖွေရေး။ J ကို Am Stat Assoc 1992 မတ်လ; 87 (417): 178 ။ [CrossRef]
R ကို Core အဖွဲ့။ R ဖောင်ဒေးရှင်း။ စာရင်းအင်းတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ URL အတွက်ဘာသာစကားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ၂၀၁၄ ။ https://www.gbif.org/tool/81287/r-a-language-and-environment-for-statistical-computing [[2019-01-15 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Štulhoferတစ်ဦးက, Ferreira LC, Landripet ဗြဲစိတ်ခံစားမှုရငျးနှီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပူးပေါင်းလိင်ကွဲလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ လိင်ဆက်ဆံရေး Ther 2013 ဒီဇင်ဘာ 23; 29 (2): 229-244 ။ [CrossRef]
Laier ကို C, Pawlikowski M က, Pekal J ကို, Schulte လက်ဗွေ, အမှတ်တံဆိပ်အမ်ဘာစွဲ: ညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလိင်စိတ်နိုးထကြုံတွေ့ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ J ကိုပြုမူနေစွဲ 2013 ဇွန်;2(2): 100-107 ။ [CrossRef] [Medline]
ကျန်းမာစိတ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Angst ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ။ int Clin Psychopharmacol 1998 ဇူလိုင်; 13 ပျော့ပျောင်း 6: S1-S4 ။ [Medline]
Benarous X ကို, Edel Y ကို, Consoli တစ်ဦးက, Brunelle J ကို, Etter JF, Cohen ကို: D, et al ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့် comorbid ပြင်းထန်စိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်း application ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: လေ့လာမှု protocol ကို။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2016 စက်တင်ဘာ 20; 7: 157 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
ဝေ H ကို, ချန် MH, Huang က PC ကို, Bai YM ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစား, လူမှုရေး phobia နှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့: အင်တာနက်စစ်တမ်း။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု 2012 ဇူလိုင် 28; 12: 92 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
ရှင်ပေါလု B, ရှိန်းပြား JW ။ ကျား, မ, ကိုထိခိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်တွန်းအား။ int J ကိုလိင်ကျန်းမာရေး 2008 အောက်တိုဘာ 12; 20 (3): 187-199 ။ [CrossRef]
Starcevic V ကို, Khazaal Y. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အကြား: အဘယ်အရာကိုလူသိများသည်နှင့်သေးသောအရာကိုလေ့လာသင်ယူရမည်သလဲ? တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2017 ဧပြီ 07; 8: 53 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
ME Levin, Lillis J ကို, ဟေးယက် SC ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကောလိပ်အထီးအကြားပြဿနာကြည့်ရှုသောအခါ? အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ။ လိင်စွဲ compulsive 2012; 19 (3): 168-180 ။ [CrossRef]
Ballester-Arnal R ကို, ကက်စထရို-Calvo J ကို Gil-Llario MD, ဘာလှုပ်ရှားမှုတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်Giménez-Garcia C. ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ: ဘာ, လူငယ်နှင့်တည်ငြိမ်ဖက်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2014; 40 (5): 444-456 ။ [CrossRef] [Medline]
Ross ကမီဂါဝပ်, Månssonလုပ် SA, Daneback K. ပျံ့နှံ့နေတဲ့, ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု Correlate ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2012 ဧပြီ; 41 (2): 459-466 ။ [CrossRef] [Medline]
Mitchell က KR, ကောင်းစွာ Ka, ဂရေဟမ် C. ဘယ်လိုယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်စိတ်နိုးထသတ်မှတ်သလဲ? J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2014; 40 (1): 17-32 ။ [CrossRef] [Medline]
McHugh RK, Votaw VR, Sugarman DE, Greenfield SF ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်လိင်နှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု။ Clin Psychol ဗြာ 2017 နိုဝင်ဘာ 10; 66: 12-23 ။ [CrossRef] [Medline]
Daneback K ကို Cooper ကတစ်ဦး, Månssonလုပ် SA ။ ဘာပါဝင်သူတစ်ဦးကအင်တာနက်လေ့လာမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2005 ဇွန်; 34 (3): 321-328 ။ [CrossRef] [Medline]
Bowins B. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ၄ င်း၏စိတ်ကိုကုထုံးဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်း ၄ ခုပုံစံ။ နံနက် J ကို Psychother 2016; 70 (3): 251-276 ။ [CrossRef] [Medline]
ချစ်သူများနေ့ SE, Shipherd JC ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှု Non-ကိုက်ညီလူတို့တွင်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ Clin Psychol ဗြာ 2018 မတ်လ 28; 66: 24-38 ။ [CrossRef] [Medline]
Khazaal Y, van Singer M, Chatton A, Achab S, Zullino: D, Rothen S, et al ။ မိမိကိုယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများတွင်နမူနာများ၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းသုတေသနအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ J Med အင်တာနက် Res 2014 ဇူလိုင် 07; 16 (7): e164 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]